Igodo 3 maka afọ ojuju ndị ahịa: Ọsọ, arụmọrụ na ihe ọmụma | ECommerce ozi ọma
Ndị ahịa chọrọ ngwa ngwa ọrụ ma ọ bụ enyemaka site na enyemaka na ịmara ebe, mgbe na otu ha masịrị iji nata ya, dabere na Nsonaazụ ọmụmụ CMO wepụtara na Tuesday.
Yana SAP Hybris, na CMO Council duziri nnyocha dị n’ onlinentanet, ya na mmadụ iri abụọ so na ya, ma ndị nwoke na ndị nwaanyị na-ekewakwa nke ọma. Pasent 2,000 biri na United States, ebe 50 n’ime ha biri na Canada na mba Europe.
Nsonaazụ ndị a bụ nchọpụta ndị a:
Pasent 52 kwuru na nzaghachi ngwa ngwa bụ isi ihe na ahụmịhe ndị ahịa na-enweghị atụ.
Pasent 47 kwuru na e kwesịrị inwe ndị ọrụ maara ihe dị njikere iji nyere aka ebe na mgbe ọ dị mkpa.
Pasent 38 chọrọ mmadụ ịgwa oge ọ bụla, ebe ọ bụla.
Pasent 38 chọrọ ozi mgbe na ebe ha chọrọ ya.
Pasent 9 chọrọ ndị na-elekọta mmadụ nke ọma.
Pasent 8 chọrọ ọrụ akpaaka.
Imu nwere anatara nke ụzọ ndị dị oke egwu onye ha chọrọ ịnweta, nyochara ekpughere, gụnyere na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ, email, nọmba ekwentị, na onye maara ihe na-atụgharị.
“Echiche nke ndị na-azụ ahịa, ma ọ bụ B2B ma ọ bụ B2C nyiwe, ha na-agbanwe, ”Liz Miller osote onye isi nke Ahịa na CMO Council.
Ndị ahịa "amalitela ịjụ, 'Ọ bụrụ na anyị dị njikere ịbụ nzukọ na-anabata ozi nke na-achọ data, nyocha nyocha, ma ghọta ihe na etu CRM si arụ ọrụ yana na ha nwere ike ịtụgharị uche na isi okwu nke a, gụnyere nke anụ ahụ" , Miller kwuru.
Ndị ahịa ma ọ bụ ndị ahịa na-atụ anya na a oru oma, ngwa ngwa na mfe ọrụ Ha anaghị atụ anya ma ọ bụ chọọ inwe ụdị mgbagwoju anya ọ bụla mgbe ha na-eme nke ọ bụla n'ime ọrụ ndị a, mana ọ dị mma ma dịkwa mkpa na enyemaka enyere aka dịịrị ha ozugbo ihe anaghị aga nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahịa » Igodo 3 maka afọ ojuju ndị ahịa: Ọsọ, arụmọrụ na ihe ọmụma